कसरी दिन बिताउँछन् पूर्वराष्ट्रपति ? « Pahilo News
कसरी दिन बिताउँछन् पूर्वराष्ट्रपति ?
प्रकाशित मिति :6July, 2016 4:39 am
२२ असार । पदमा रहँदा मानिसहरुका अघिपछि लाग्नेहरुको कमी हुँदैन । ‘हजुर हजुर’ भन्दै अघि–पछि गर्ने कर्मचारीदेखि राजनीतिक कार्यकर्ताहरु सम्मले उसलाई घेरेका हुन्छन् । तर, तिनै मानिसका अवकाशपछिका दिनहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई हेर्दा पुग्छ ।
बिहान ४ देखि साढे ४ बजेसम्म उठिसक्ने पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव सबैभन्दा पहिले शारीरिक अभ्यास गर्छन् । उनलाई घाँटी, ढाड र जोर्नीको समस्या छ । त्यसबाट छुटकारा पाउन उनी करिब ४५ मिनेट अभ्यास गर्छन् । त्यसपछि नित्य कर्म सकेर १ घण्टा हिँड्न निस्कन्छन् । ललितपुरको बागडोलस्थित सरकारले भाडामा लिएको निवासमा कम्पाउण्ड निकै सानो भएकाले बिहान हिँड्न उनलाई सकस पर्छ । धुलाम्मे बाटोमा हिँड्नु कठिन त छ नै, पानी परेका बेला हिलोले थप हैरान पार्छ । ‘बिहानमा हिँड्न समेत नपाइने समस्याले उहाँ हैरान हुनुहुन्छ’, पूर्वराष्ट्रपतिका एक सहयोगी भन्छन्, ‘त्यही भएर उहाँले बरु शहरभन्दा टाढा गाउँतिर अलि ठूलो कम्पाउन्ड भएको सामान्य घर भए हुन्थ्यो भनेर सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभएको छ ।’
बिहान एक घण्टा हिँडेपछि उनी निवासमा पुगेर पत्रपत्रिका पढ्छन् । त्यसपछि भेटघाट सुरु हुन्छ । कांग्रेस र एमालेमा रहेका पुराना साथीहरु कहिलेकाहीँ उनलाई भेट्न आउँछन् । पूर्वकर्मचारी, शुभचिन्तकहरु अक्सर समय लिएर वा नलिएर पनि भेट्न आइरहन्छन् । तर, पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरु यो घरमा बसेको ८ महिनासम्म उनलाई भेट्न आएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यले यस घरमा पाइला टेकेका छैनन् । पहिले आफैं सक्रिय राजनीतिमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त एकपटक फोन पनि गरेका छैनन् । उनीबाहेक अरु कांग्रेसी नेता पनि पूर्वराष्ट्रपतिको सम्पर्कमा छैनन् ।
‘बिहानमा हिँड्न समेत नपाइने समस्याले उहाँ हैरान हुनुहुन्छ’, पूर्वराष्ट्रपतिका एक सहयोगी भन्छन्, ‘त्यही भएर उहाँले बरु शहरभन्दा टाढा गाउँतिर अलि ठूलो कम्पाउन्ड भएको सामान्य घर भए हुन्थ्यो भनेर सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभएको छ ।’
भेटघाट करिब १०–११ बजेसम्म चल्छ । त्यसपछि उनी खाना खाएर आराम गर्छन् । कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा निम्तो आए १ बजेपछि सहभागी हुन्छन्, नभए घरमै बस्छन् र कोही शुभचिन्तक आए भेटघाट गर्छन् । शिक्षा, वातावरण संरक्षण र बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रममा निम्तो आए सकभर उनी नाइनास्ती गर्दैनन् । बेलुका कुनै महत्वपूर्ण व्यक्तिसँग भेटघाट पनि गर्छन्, नभए किताब पढेर बस्छन् । ९ बजेसम्म बेलुकीको खाना खाएर साढे ९ देखि १० बजेसम्म सुतिसक्छन् ।
यसैगरी उनको आठ महिना बितेको छ । कुनै बेला मुलुकको शक्तिकेन्द्रका रुपमा व्यस्त रहने पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव अहिले गुमनाम पात्र बनेका छन् । सरकारले जीवनयापन व्यवस्थापनमा गरेको उपेक्षा त छँदैछ, सँगै राजनीति गरेका सहकर्मीहरुले समेत उनलाई वास्ता गर्न छाडेका छन् । उनका एक पूर्वसल्लाहकार भन्छन्, ‘लासलाई उपियाँले छाडे झैं गरिएको छ, पूर्वराष्ट्रपतिलाई । कोही पुछ्न पनि आउँदैनन् ।’
शीतलनिवासबाट यो घरमा सरेयता उनी चार पल्ट गृहजिल्ला धनुषा पुगेका छन् । बढीजसो बिहाबारीमा सहभागी हुन उनलाई निम्तो आउँछ । तर, १० बर्षदेखि उच्च रक्तचाप, ५ बर्षदेखि डायबिटिज र ६ बर्षदेखि प्रोस्टेटको समस्या रहेका पूर्वराष्ट्रपति यादव सकभर विहाबारीका निम्तोमा जाँदैनन् ।
पूर्वराष्ट्रपति यादव यो घरमा सर्दा आफ्नो घर हुँदाहुँदै लोभ गरेको भन्दै एकथरीले आलोचना पनि गरे । उनले २०६३ सालमा ललितपुरको बागडोलमै एउटा घर किनेका थिए । राष्ट्रपति बनेपछि उनले आफूलाई सरकारले हेरिहाल्छ भनेर त्यो घर छोरी अनिताका नाममा गरिदिए । ४ आनामा बनेको यो घर निकै साँघुरो र पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएकाले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त थिएन । पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिने सैनिकहरुलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्थ्यो । ‘एकथरी मान्छेले लोभ देखाएको भनेर आलोचना पनि गरे’, उनका एक सहयोगी भन्छन्, ‘पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई त्यस्तो घरमा कसरी राख्न मिल्छ ?’
बढीजसो बिहाबारीमा सहभागी हुन उनलाई निम्तो आउँछ । तर, १० बर्षदेखि उच्च रक्तचाप, ५ बर्षदेखि डायबिटिज र ६ बर्षदेखि प्रोस्टेटको समस्या रहेका पूर्वराष्ट्रपति यादव सकभर विहाबारीका निम्तोमा जाँदैनन् ।
हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको, नक्सा पास नभएकाले विजुली र पानी जडान नभएको घरमा बसाइएका राष्ट्रपतिले यसबीचमा सरकारले घरभाडा समयमा नतिरिँदिँदा घरधनीबाट अपमानित समेत हुनुप¥यो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पहलमा भर्खरै घरभाडा, बिजुली र पानीको तिरिए पनि उनले सरकारबाट अन्य सुविधा, निवृतिभरण केही पाएका छैनन् । तत्काललाई घरभाडाको समस्या सुल्झिए पनि फेरि यो नदोहोरिएला भन्नेमा उनी विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
‘अबको एक–दुई महिनासम्म जीवनयापन सहज भएन भने आफ्नै व्यवस्था गर्नुपर्ने मनस्थितिमा उहाँ पुग्नुभएको छ’, पूर्वराष्ट्रपतिका एक सहयोगी भन्छन्, ‘घरभाडाको विषय अदालतसम्म पुगेपछि उहाँले यो घर छाड्ने निधो गरिसक्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिज्यूको पहलमा घरभाडाको समस्या सुल्झिएपछि अहिले केही समय रोकिनु भएको छ, यस्तै समस्या रहे उहाँ बरु जनकपुर गएर बस्ने मुडमा हुनुहुन्छ ।’ यतिखेर उनी पारिवारिक भेटघाट र कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुरमै छन् ।
राष्ट्रपतिको सरकारी भाडाको निवासमा अहिले क्याप्टेनको नेतृत्वमा ३० जना सैनिक खटाइएका छन् । उनीहरुलाई बस्ने व्यवस्था नहुँदा असारको झरीमा पनि पालमुनि बस्नुपरेको छ ।
काठमाडौँ, १६ फागुन । संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँचपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मध्ये दुई विघटनका कदमले
आफूलाई हटाएर देखाउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई प्रधानमन्त्रीको चुनौती
झापा, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई
केरुङ नाका सोमबारदेखि सञ्चालन हुँदै
काठमाडौँ, १६ फागुन । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनःसञ्चालन हुने भएको छ । चीनमा
झमेला झेल्दै संसद्
काठमाडौँ, १६ फागुन । सर्वाेच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेशानुुसार प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन अबको आठ दिनभित्रै